China Cefquinome Sulphate Injection 2.5% ifektri abakhiqizi | U-Lihua
I-Cefquinome (njenge-sulfate): 25mg
Kuboniswa ekwelapheni zonke izinhlobo zezifo ezibangelwa amagciwane abucayi e-cefquinome, kufaka phakathi izifo zokuphefumula ezibangelwa i-pasteurella, i-hemophilus, i-actinobacillus pleuropneumonia ne-streptococci, i-uteritis, i-mastitis kanye ne-post partum hypogalactia ebangelwa u-E. Coil kanye ne-staphylococci, meningitis yi-staphylococci ezingulubeni, ne-epidermatitis ebangelwa yi-staphylococci.
Lo mkhiqizo uphikisiwe ezilwaneni noma ezinyonini ezizwela kuma-antibiotic e-β-lactam.
Musa ukuphatha izilwane ezingaphansi kuka-1.25 kg isisindo somzimba.
- Izimo zokuphefumula ezibangelwa yi-Pasteurella multocida ne-Mannheimia haemolytica: 2 ml / 50 kg bodyweight izinsuku ezi-3-5 zilandelana.
- I-Digital dermatitis, i-bulbar necrosis esithathelwanayo noma i-necrobacillosis ehlukahlukene ye-interdigital: 2 ml / 50 kg isisindo somzimba izinsuku ezi-3-5 ezilandelanayo.
- I-Acute Escherichia coli mastitis ehambisana nezimpawu zezimo zesistimu: 2 ml / 50 kg isisindo somzimba izinsuku ezimbili ezilandelanayo.
Inkonyane: E. coli septicemia ematholeni: 4 ml / 50 kg isisindo somzimba izinsuku ezi-3-5 zilandelana.
- Ukutheleleka kwamagciwane emaphashini kanye nomgudu wokuphefumula obangelwe yiPasteurella multocida, iHaemophilus parasuis, i-Actinobacillus pleuropneumoniae, iStreptococcus suis nezinye izinto ezithinta i-cefquinome: 2 ml / 25 kg bodyweight, izinsuku ezintathu ezilandelanayo.
- E. coli, iStaphylococcus spp., IStreptococcus spp. kanye nezinye izinto eziphilayo ezibucayi ezithinta iMastitis-metritis-agalactia syndrome (MMA): 2 ml / 25 kg isisindo somzimba izinsuku ezimbili ezilandelanayo.
Izinkomo inyama futhi anikele 5 izinsuku
Izinkomo zobisi amahora angama-24
Ingulube inyama kanye nenyama izinsuku ezi-3
Langaphambilini Inaliti ye-calcium Gluconate 24%
Olandelayo: Ceftiofur Injection 5%
Ukujova kwe-Vitamin AD3E